Hoggantoonni Majlisa Magaalaa Finfinnee Sheekh Sulxaan Haaj Amaan irratti himannaa dhiheesuun gabaafame - NuuralHudaa
Hoggantoonni Majlisa Magaalaa Finfinnee Sheekh Sulxaan Haaj Amaan irratti himannaa dhiheesuun gabaafame
Manni marii Dhimmoota Islaamaa magaalaa Finfinnee sababa hoggantoota majlisaa jidduu, namoonni tokkummaa hawaasa Muslimaa diigaanii fi seeraa alaatti mindeeffaman jiraatuu ibsuun, guyyaa kaleessaa irraa kaasee miindaan hojjii raawwachiistuuf akka hin kaffalamne murteessuu gabaasuun keenya ni yaadatama.
Namoota kanneen jidduu muraasni kaleessa waree booda, Waajira Bulchiinsa fi nageenya magaalichaatti deemuun, Prezidaantii majlisa magaalaa Finfinnee kan tahan Sheekh Sulxaan Haaj Amaan irratti himannaa dhiheessuu gabaafame.
Kanuuma hordofuun Sheekh Sulxaan guyyaa kaleessa waamamanii kan qorataman tahuu beekame.
Haaluma kanaan Sheekh Sulxaan namoota kana jidduu namni ji’a tokkootti dalagaa malee birriin 27,000 kaffalamuuf jiraatuu fi qabeenyi hawaasa muslimaa qisaasuu jiru kana dhabsiisuuf tarkaanfii kana akka fudhatan hubachiisan.
Hoggantoonni waajira nageenyaatis tarkaanfiin fudhatame sirrii tahuu fi rakkoo jidduu isaanii jiru mariin akka hiikan himun, kan adda bayan tahuu gabaafame.
Odeeyfannoo biraatiin immoo majlisni Federaalaa Kamiisa iftaanii Walgahii ariifachiisaa waamu dhagahame, haata’u malee majlisni magaalaa Finfinnee gama isaatiin walgahicha irratti, Ulamaa’onni 26’n ummatan naannoolee hunda irraa bakka buufaman akka argamu qaban gaafatu odeeyfannoon ni addeessa.
mashaa allah sinile odefano kana siif lachu kesaniif galatomaa
عبد الرزاق غبي says:
itti fufaa Qophiin keysan haalaan bareeda rabbi isin irraa haa jaalatu
As wr wb MaashaaAllah Tabaarakallh RabbinSinhaagargaaruu
August 4, 2021 sa;aa 12:29 pm Update tahe